मार्समेलोको नाम बेचेर दुई करोड ठगी: सात जना प्रहरी हिरासतमा - samayapost.com
मार्समेलोको नाम बेचेर दुई करोड ठगी: सात जना प्रहरी हिरासतमा
समयपोष्ट २०७४ पुष १ गते १:३४
विख्यात अमेरिकी डीजे मार्समेलो नआउँदा बुधबार मध्यरात नारायणहिटीपथस्थित ‘क्लब डेजाभु’ रणभूमि बन्यो। मार्समेलोजस्तै देखिने हुलियाको खोजी भइरहेको छ। उनको नाम बेचेर दुई करोड ठगी गरिएको प्रहरीको दाबी छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
नाइट क्लब डेजाभुमा पूर्वनिर्धारित समयमा ६ घन्टासम्म कुर्दा पनि डीजे मार्समेलो नआएको आयोजकले मध्यरात जानकारी दिएपछि दर्शकहरूले तोडफोड गरेका हुन्। भागाभाग भयो। उनलाई ल्याउने भन्दै महँगो टिकट बिक्री गर्नमा संलग्न भएको अभियोगमा सात जना अहिले ठगी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन्।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनी भन्छन्, ‘मार्समेलोको वास्तविक नाम के हो भन्ने नै थाहा भएन। कसले भन्न सक्छ वास्तविक नाम ? प्रस्तुति दिने समयमा कहाँ थियो ? उसको वास्तविक हुलिया आदिबारे अनुसन्धानकै क्रममा छौं।’
मार्समेलोले डेजाभुमा आफ्नो प्रस्तुति देखाउन नपाएकोमा क्षमा माग्दै गरेको ट्विटलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छ। ज्वरोका कारण बिरामी परेकोले डाक्टरको सल्लाहबमोजिम उपस्थित हुन नसकेको जनाउँदै उनले क्षमा मागेका छन्। फुड प्वाइजनिङ भएको दाबी मार्समेलोले गरेका छन्। उनले ट्विटरमार्फत भने, ‘प्र्रस्तुतीका लागि आउन कोसिस गर्दा डाक्टरले आउन दिएनन्। स्वास्थ्य पहिला हुन्छ। बुझिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आशा छ, तपाईंहरूसँग भेटन आउनेछु।’
१५ सय क्षमता, टिकट सात हजार बिक्री
उनको म्युजिक शैली हेभी इलेक्ट्रोनिक डान्स गर्ने खालको रहने गरेको छ। ट्विटरमार्फत जानकारी दिन रुचाउने मार्समेलोले एक वर्षयता अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत र पारग्वेमा आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन्।